'ठूलै आकारको बजेट चाहिन्छ, भ्याटमा बहुदरको विकल्प छैन'| Corporate Nepal
'ठूलै आकारको बजेट चाहिन्छ, भ्याटमा बहुदरको विकल्प छैन'
जेठ १०, २०७७ शनिबार १८:२१
आगामी बजेट कस्तो ल्याउनुपर्छ भनेर अर्थ समितिले स्पष्ट खाका उपलब्ध गराएको छ । बजेट कोभिड १९ को असर कम गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । त्यस बाहेक सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले भने अनुसारका केहि प्याकेज पनि आउँछन् र पुराना महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरुले पनि निरन्तरता पाउनेछन् । स्वास्थ्य पूर्वाधारमा केहि जोड दिने, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने गरि बजेट ल्याउनुपर्छ र त्यसरी नै आउँछ भन्ने लाग्छ ।
विस्तारकारी बजेटको आवश्यकता
बजेटमा धेरै कुराहरु हुन्छन् तर पनि त्यसको अंकले धेरै महत्व पाउँदै आएको छ । कोरोनाका संक्रमणपछि नेपालले कत्रो बजेट ल्याउला र ल्याउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि तर्कहरु भैरहेका छन् । संसारभर कुनै पनि देशमा कुल गाहस्थ उत्पादन(जीडीपी)को ५० प्रतिशतको बजेट ल्याउने गरिएको रहेनछ । नेपालले पनि त्यसरी जीडीपीको ५० प्रतिशतको बजेट ल्याउने कुरै भएन् ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याईसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बीचमा तालमेल मिलेन भनेर नतिजा राम्रो आउँदैन् । अर्थ समितिले बजेट सम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदन पनि त्यहि आधारमा तयार पारेको हो । नीति तथा कार्यक्रमले अघि सारेका योजनाहरुलाई पुरा गर्न सहज हुने गरि जीडीपीको ४५ प्रतिशत हाराहारीमा बजेट ल्याउन भनेका हौं ।
तीन घण्टाको नीति आउने र अनि आधा घण्टाको बजेट आयो भने समस्या हुन्छ । दोश्रो कुरा भनेको यतिबेला उद्योगी व्यापारी देखि बैंकर, यातायात देखि निर्माण व्यवसायीसम्मले राहत प्याकेज मागिरहेका छन् । ३० लाख मानिस यतिबेला बेरोजगार बनिरहेका छन् । तिमध्ये नि अशक्तहरुको संख्या पनि ठुलै छ । उनीहरु रोजगार भएकाले नै परिवार पालिएको थियो । अब रोजगारी गुमेपछि उनीहरुको जीवन कसरी चल्ला ? उनीहरुलार्ई नगद मै राहत दिनुपर्ने हुन सक्छ । बजेटले यसलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
अर्काे पक्ष भनेको अहिले कायम रहेका उद्योगहरुलाई मर्नबाट जोगाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि पनि राहत चाहिन्छ । सरकारले विगतका महत्वूर्ण कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता पनि दिनुपर्ने आवश्यकता छ र कोरोना प्रभावित क्षेत्र र वर्गलाई राहत पनि उपलब्ध गराउनै पर्नेछ ।
स्वास्थ्यको पूर्वाधार निर्माणलाई पनि व्यापक मात्रामा बढाउनुपर्नेछ, त्यसका लागि पनि ठूलो बजेट आवश्यक पर्छ ।
१० प्रतिशत नागरिकलाई कोरोना लाग्न सक्छ भन्ने मान्दा पनि ३० लाख नेपालीलाई क्वारेन्टाइन, आइसोलेशनमा राख्नुपर्ने हुन्छ, उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्छ । अनि खर्च चाँही धेरै गर्नुपर्ने अनि बजेट चाँही सानो बनाउने भन्न मिल्छ र ? त्यसकारण यो बेलामा संकुचनकारी बजेटले हाम्रा समस्याहरु समाधान गर्न सक्दैन् । विस्तारकारी बजेटले मात्रै नीति तथा कार्यक्रमले बोलेको कुरा र अहिलेका हाम्रा आवश्यकता पुरा गर्न सक्छ । त्यसैले हामीले जीडीपीको ४५ प्रतिशत हाराहारीको बजेट ल्याउन सकिन्छ भनेर सुझाव दिएका हौं ।
श्रोत व्यवस्थापनका चुनौती र समाधान
हामीले श्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे पनि स्पष्ट सुझाव दिएका छौं । जीडीपीको ४५ प्रतिशतको बजेट ल्याउने हो भने १६ खर्ब ९५ अर्बको हुन्छ । त्यसको श्रोत कसरी जुटाउने भनेर हामीले वृहत छलफल गरेका थियौं । जसका लागि १० खर्ब राजश्व उठाउने, एक खर्ब वैदेशिक सहायता जुटाउने, जीडीपीको ६ प्रतिशतले हुने २ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लगायतका सुझाव दिएका छौं । बाँकी अपुग श्रोत वैदेशिक ऋणबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
कतिपयले आन्तरिक ऋण उठाउँदा निजी क्षेत्रले लगानीका लागि पैसा पाउँदैन भनेको पनि सुनियो तर त्यस्तो अवस्था आउँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । निजी क्षेत्रले राहत पनि माग्ने अनि बजेट सानो ल्याउनुपर्छ, आन्तरिक ऋण पनि कम उठाउनुपर्छ भनेर पनि हुन्छ र ?
वैदेशिक सहायताका लागि विश्व बैंक, मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकहरुले कोरोनाबाट प्रभावित नेपाल जस्ता साना अर्थतन्त्र भएका देशहरुलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरिसकेका छन् । चीनले पनि सघाउँछु भनेको छ । यतिबेला कम विकसित मुलुकहरुको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि विश्वका थुप्रै देशहरुले सहयोग गर्ने भनेका छन् ।
राहत प्याकेज के र कसरी ?
हामीले जीडीपीको ५ प्रतिशतले हुने गरि राहत प्याकेज ल्याउन भनेका छौं । त्यो भनेको पौने दुई खर्ब जति हुन्छ । भारतले पनि ठुलो राहत प्याकेज ल्याएको छ । विश्वका धेरै देशहरुले राहत प्याकेज ल्याएका छन् । हामीले पनि पौने २ खर्ब जतिको राहत प्याकेज ल्याउन भनेका छौं । हामी अरु देशले जस्तो ठूलो राहत प्याकेज दिन सक्दैनौं तर पनि उद्योगी व्यवसायी र आम नागरिकले बाच्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा राहत प्याकेज अघि सार्नुपर्छ भनेका हौं ।
जनप्रतिनिधीको तलब कटौती
जनप्रतिनिधीहरुको तलब सुबिधा कटौतीका कुरा पूर्णतः सरकारको हातमा छ । यसले ठूलो श्रोत त उपलब्ध गराउँदैन तर सरकार प्रति नागरिकको विश्वास भने पक्कै पनि बढाउँछ । जनप्रतिनीधीहरुको केहि सुबिधा कटौती गर्ने र तलबी कर्मचारीहरुका लागि आयकरको सिमा केहि घटाउन सकिन्छ वा आयकर नै केहि बढाउन पनि सकिन्छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि सकिन्छ ।
कर्मचारीको भर्ना रोकौं
हरेक वर्ष निजामति तर्फ २० हजार र सुरक्षा सेवा तर्फ २० हजार नयाँ भर्ना हुँदै आएको रहेछ । यो वर्षभरी कुनै पनि क्षेत्रमा नयाँ कर्मचारी भर्न नगर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ । यसले अरबौं श्रोत जम्मा गर्न सकिन्छ ।
अब भ्याटमा बहुदर कायम गरिनुपर्छ । हामीसँग कृषिसँग सम्बन्धीत उद्योग र औषधी उद्योगीहरुले भ्याटमा जान तयार छौं भन्नुभयो । तर अहिलेको जस्तो १३ प्रतिशत भ्याट चाँही लगाउनु हुन्न भन्ने उहाँको तर्क देखियो । कृषिजन्य र औषधी उद्योगमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने कुरा जायज पनि हुन्न । व्यवसाय गरेपछि भ्याटमा नजाँदा पनि समस्या पर्ने भयो अनि भ्याटमा जाउँ भने १३ प्रतिशतको दरले समस्यामा रहेका थुप्रै उद्योगी व्यवसायी भेटिए ।
औषधी र कृषि जन्य उद्योगीलाई ४÷५ प्रतिशत भ्याट लगाउन सकिन्छ । भ्याटमा बहुदर लागु गर्दा लबिङ गरेर धेरैले न्युन दर कायम गराउँछन् भन्ने आंशका पनि छ । तर त्यसो भन्दैमा अब भ्याटलाई एउटै दरमा राखिरहन सकिँदैन् । सरकारले कानुनै बनाएर भ्याटमा बहुदर कायम गर्नुपर्छ । बजेट पनि आफैंमा एक वर्षका लागि कानुन नै हो ।
त्यसबाटै बहुदर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । भारत लगायत विश्वका धेरै देशहरुले भ्याटमा बहुदर कार्यान्वयन गरिसकेका रहेछन् । भ्याटमा नजाँदा पनि समस्या हुने र भ्याटमा जान खोज्दै १३ प्रतिशतको स्ल्याबले तर्सिएका उद्योगी व्यवसायीलाई समेट्न पनि बहुदरमा जानै पर्ने अवस्था देखेका हौं । भ्याटमा बहुदर कायम गराउँदा राजश्वको दायरा पनि बढ्छ जसले श्रोत व्यवस्थापनमा सरकारलाई ठूलो सहयोग पुग्छ । (अर्थ समिति सभापति दाहालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
विषम परिस्थितिमा पनि बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक रहेको अर्थमन्त्रीको दावी
पशपुति मन्दिरको जग्गामा व्यक्तिको रजाइँ, एक अर्ब आम्दानी अर्कैको पोल्टामा जाने खतरा
काठमाडौँको रु १६ अर्ब ४३ करोडको बजेट पारित, होटल/रिसोर्टको सम्पत्ति करमा ७५ प्रतिशत छुट